Deschamps oo digniin u diray mid ka mid ah xidigaha Pep Guardiola, xili sidoo kale uu si weyn u amaanay Mbappé – Gool FM
Deschamps oo digniin u diray mid ka mid ah xidigaha Pep Guardiola, xili sidoo kale uu si weyn u amaanay Mbappé
Dajiye October 8, 2018
(France) 08 Okt 2018. Macalinka xulka qaranka France ee Didier Deschamps ayaa digniin u diray mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda Manchester City, isagoo dhinaca kale si weyn u amaanay Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé.
Hadalka Didier Deschamps ayaa wuxuu imaanayaa kadib markii uu maanta kasoo hor muuqday shir jaraa’id.
“Kama qoomameenayo inaan liiskan ka saaro Benjamin Mendy, sababtoo ah waxaan u maleynayaa in go’aan kasta ee aan gaaro inuu yahay mid aad u wanaagsan, ama dhicin ka qeyb galkiisa kulankii kooxaha Manchester City iyo Liverpool”.
“Dhaawacii dhanka jilibka ahaa uu kasoo kabtay Benjamin Mendy dhawaantan, ayaa ka dhigtay inuu diirada saaro xaaladiisa jir ahaaneed ee gudaha iyo dibada garoonka, si fiican ayuu u ogyahay waxa uu u baahan yahay si uu u helo qaab ciyaareed xoogan”.
Dhinaca kale macalinka xulka qaranka France ee Didier Deschamps ayaa inta uu ku gudi jiray shirka jaraa’id wuxuu ku amaanay laacibka kooxda PSG ee Kylian Mbappé kadib markii uu dhaliyay 4 gool kulankii Olympique Lyon.
“Waxa uu sameeyay Kylian Mbappé waxay ahayd waxaan caadi aheyn, inkastoo uu yahay ciyaaryahan da ‘yar ah, hadan waa mid cajiib ah, waan ku faanayaa inuu kasoo jeedo dalka France”.
Hooyada dhashay Cristiano Ronaldo ee Dolores Aveiro oo codsi deg-deg ah u dirtay taageerayaasha wiilkeeda
Liiska Xiddigaha ku tartamaya Ballon d'Or Yaraha oo la soo saaray!!....(Waa Abaal Marin CUSUB)